Muqdisho: 23 Haween iyo Carruur ah ayaa ku dhaawacmey Duqeyn - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Dhaawacyada Ayaa La Dhigey Cusbitaalka Dayniile, Waxaana Daweeyey MSF
Nayroobi/New York, Luulyo 4, 2010—Iyada oo dagaallo xooggani ay mar kale ka dhacayaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, ayaa Médecins Sans Frontières (MSF) waxa ay 42 qof oo qaba dhaawacyo ka soo gaarey qarax ay dhigtey cusbitaalkeeda ku yaalla degaanka Dayniile muddadii u dhaxaysay Khamiistii iyo Jimcihii. 42da qof ee dhaawaca ah ee lagu daweeyey qolka xaaladaha degdegga ah ee cusbitaalka, ayaa 23 ay ahaayeen haween iyo carruur ay da’doodu ka yar tahay 14 sano jir.
“Tani waa tiradii ugu badneyd oo haween iyo carruur dhaawacmey ah ee aan 24 gudahooda aragno muddo afar bilood ah” ayaa uu yiri Madaxa Ergada MSF Axelle de la Motte St. Pierre. “Qaar badan ayaa qabey dhaawacyo aad u culus”.
Ilaa bilowgii sanadka, ayaa 450 haween iyo carruur dagaallada ku soo dhaawacmey ah la dhigey Cusbitaalka Dayniile, arrintan oo muujineysa dhibaatada weyn ee dadka rayidka ah ka soo gaareyso iskahorimaadka socda.
Waqti uu dagaalku dhibaato weyn geysanayo oo uu ka sii darayo oo qaar ka mid ah tas-hiilaadka caafimaadka ee ku yaalla Muqdishana uu hub ku soo dhacayo, ayaa MSF waxa ay ugu baaqeysaa dhinacyada ku lugta leh iskahorimaadka in ay qaadaan dhammaan tallaabooyinka looga fogaanayo in dhaawac iyo dhimasho ay soo gaaraan dadka rayidka ah iyo in ay ixtiraamaan waajibka ka saaran ilaalinta tas-hiilaadka caafimaadka.
MSF waa hay’ad caafimaad oo madax bannaan oo mashaariic ka wadda siddeed gobol oo Soomaaliya ka tirsan. In ka badan 1,500 shaqaale Soomaali ah, oo ay taageerayaan ku dhowaad 90 shaqaale ah oo Nayroobi jooga, ayaa bixiya daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, daaweynta nafaqo-xumada, qalliin, taageeridda dadka barokacay, iyo bixinta biyaha iyo sahayda gargaarka. MSF kama qaadaneyso dowladna wax maaliyad ah oo ay ku fuliso mashaariicdeeda ay ka waddo Soomaaliya. Deeqaha waxa ay ka imanayaan shakhsiyaad kala jooga dunidan daafaheeda kala duwan.
Tags: Banadir, South Central Somalia, dayniile, dhaawacyo, duqayn, haween iyo caruur, Muqdisho